Cabitaan macaan wuxuu astaan u yahay mustaqbal macaan oo sugaya aroosada iyo aroosaha… – Hagaag.com
Posted on 2 Diseembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Ku darsashada sonkorta shaaha waxay noqon kartaa waxyaabaha ugu badan ee aad sameyso noloshaada maalinlaha ah. Laakiin dalka Azerbaijan, ficilkan yar wuxuu furi karaa cutub cusub nolosha labada qof si wada jir ah.
Waxaa jira dhaqamo badan oo xiisa badan oo laga xardhay dhaqanka Azerbaijaniga, qofka wuu dareemi karaa tani isagoo garanaya caadooyinka iyo dhaqamada guurka ee gaarka u ah waddankaasi.
Shahin Mostafayev, oo ah maamule kuxigeenka Machadka Daraasaadka Qaranka ee sharqiga ee Akadeemiyada Cilmiga, ayaa u sheegay CNN Carabi in qofku arki karo in badan oo kamid ah caadooyinka iyo dhaqamada waaweyn ee waddanka, maadaama si taxaddar leh loo dabaqo ilaa maantadan la joogo.
Sonkor la’aan? Aroos maleh..
Mid ka mid ah caadooyinka ugu xiisaha badan Azerbaijan waxaa laga yaabaa inay tahay dhaqanka guurka la xiriira. Dhaqankan, sonkorta ayaa lagu meeleeyaa shaaha taas oo ah astaan ​​u oggolaanshaha guurka.
Markay reerka wax aroosaya yimaadaan guriga aroosadda si ay u codsadaan guur, booqashada ugu horreysa lama aqbalo dhaqanka Azerbaijani. Kadib, qoyska wax aroosaya ayaa isku dayaya inuu mar labaad booqdo guriga aroosadda .. Mostafayev ayaa wuxuu sharxay in booqashadooda iyo ku noqnoqoshadooda ay muujinayaan ujeedooyinkooda culus ee raadinta gacanta aroosadda.
“Waa caado in la booqdo guriga aroosadda toddoba jeer. Intaa ka dib, qoyska aroosadda badanaa waxay oggolaadaan guurka.” ayuu raaciyey.
Waxa uu tilmaamay in dadka reer Azerbaijan ay yihiin dad soo dhaweyn leh “Had iyo jeer waxaan diyaarinaa cunto marka ay martida yimaadaan gurigeena, xaalada kaliya ee aan la siinin shaah waa marxaladda lagu baadi goobaya qof nolosha kula wadaaga,” ayuu raaciyay. Haddii la isku afgarto waxaa la keenayaa Shaah macaan. ”
Markii la oggolaado, waalidku wuxuu aroosadda ku casuumaa qolka si uu uga codsado inay siiso shaaha macaan martida.
Waa maxay macnaha uu leeyahay macaanka marka aad rabto inaad ka guursato Azerbaijan?
Mostafayev wuxuu xusay in waxa ay ugu yeeraan “shaah macaan” ay leeyihiin magac dhaqameed Azerbaijan, “shaah laba-midab leh”.
Waxaa loo soo bandhigayaa qaab gaar ah oo biyuhu fadhiyo salka koobka shaah dhaqameedka sidii uu ku jiro miro, oo loo yaqaan “armodo”, halka wixii la isku soo daray ay wali joogaan meesha ugu sareysa. Iskuma darsamaan.
Kadib ogolaanshaha guurka, shaaha waa la isku qasayaa, labadii midab ayaa isku darsamaya, taasoo muujineysa “midow laba qoys,” ayuu yiri Mustafayev.
Cabitaanka Macaan wuxuu astaan ​​u yahay mustaqbal “macaan” ee sugaya aroosadda iyo aroosaha.